Inona no ho hitanao ao Jaipur | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | 14/10/2021 17:00 | Nohavaozina amin'ny 14/10/2021 20:15 | India, Inona no ho hita
India Firenena midadasika izy ary iray amin'ireo fanjakana mamorona azy dia Rajasthan, izay ny renivohiny no tanàna tsara tarehy sy manintona Jaipur Hiresaka momba azy io isika anio satria io no iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra eto amin'ny firenena.
Iray amin'ireo tanàna be mponina indrindra eto India izy ary manana anaram-bosotra mahafinaritra: «Ny tanàna mavokely», satria raha misy loko manjakazaka amin'ny trano, dia izay. Ary koa, nanomboka tamin'ny 2019 Jaipur es Lova manerantany. Androany ary inona no ho hita any Jaipur.
2 Inona no ho hita any Jaipur
Izany no renivohitry ny fanjakan'i Rajasthan, dia onenan'i Olona iray tapitrisa 3 ary noho izany dia tanàna fahafolo be mponina indrindra ao India izy io. Ho fanampin'izay, araka ny efa nolazainay tetsy ambony, dia toerana fitsangatsanganana faratampony io nanomboka teo Any amin'ny faribolana Golden Triangle no misy azy izay mandrafitra an'i Delhi sy Agra. Delhi dia manodidina ny 240 kilometatra miala sy Agra 149 km, ho fanampin'ny zava-misy fa matetika i Jaipur no lohataona amin'ireo tanàna hafa toa an'i Kota, Udaipur na Mount Abu ...
Jaipur dia natsangan'ny King of Amer tamin'ny 1727 amin'ny fikasana hamindra ny renivohiny avy any Amer mankany amin'ity tanàna vaovao ity satria betsaka kokoa ny olona ary vitsy ny rano. A) Eny, Heverina, nomanina ary namboarina i Jaipur. Nozaraina ho sakana sivy ny drafitra, roa misy tranobe sy lapam-panjakana ary ny ambiny natokana ho an'ny besinimaro. Navoaka ny vavahady mimanda fito sy ny lalambe midadasika.
nisy tamin'ny 1876 dia nolokoana mavokely ny tanàna, amin'ny fotoana fitsidihan'ny Prince of Wales Albert, ny Mpanjaka Edward VII ho avy. Ankehitriny dia mbola tavela tamin'io loko tany am-boalohany io ary izany no iantsoana an'i Jaipir ihany koa Tanàna mavokely.
Ny toetrandro dia mafana be amin'ny fahavaratra, ary mando, ary ny ririnina dia malefaka sy fohy. Avy be ny orana eo anelanelan'ny Jolay sy Aogositra, noho ny fandalovan'ny mononta, ary raha mandeha fahavaratra ianao dia miomàna fa mety hisy andro manohina ny 48 ºC. Mampatahotra.
Amin'ny ankapobeny, ny Lapan'ny lapa izay ao anatin'ny tanàna mimanda. Noheverin'ny Mpanjaka Maharaja Sawai Jai Singh II, mpanorina azy, ary fampifangaroana kanto amin'ny endrika maritrano roa, ny Mughal sy ny Rajput. Mbola androany, any amin'ny faritra sasany amin'ilay sarotra, miaina ny fianakavian'ny mpanjaka.
Ahitana ny Mubarak mahal na lapan'ny fandraisana, ny Lapan'i Maharani na ny lapan'ny mpanjakavavy. Androany ny tranon'ny voalohany dia tranom-bakoka mpanjaka ary ny faharoa dia mampiseho fitaovam-piadiana taloha tamin'ny taonjato faha-XNUMX, saingy trano tsara tarehy ihany koa izy misy sary hosodoko amin'ny valindrihana izay mbola tsara tarehy ankehitriny.
Iray amin'ireo karatra paositra mahazatra an'i Jaipur ny Hawa Mahal, na Lapan'ny Rivotra. Izy io dia natsangana tamin'ny taona 17879 avy amin'ny mpanjaka poeta Sawai Pratap Singh ho fialan-tsasatry ny mpianakavy. Amin'ny alàlan'ny varavarankely tsy hita isa ny fianakavian'ny mpanjaka dia afaka mizaha ivelany nefa tsy tazana.
Ny rihana dia misy rihana dimy, fifangaroan'ny fomba Indiana sy Hindou, vita amin'ny vatosokay mavokely izy ary na dia sary avy any ivelany foana aza dia afaka miditra sy miakatra amin'ny tampon-trano mba hankafy ny fahitana lehibe an'ny tanàna. Ao amin'ny tokotany dia misy tranombakoka arkeolojika.
El Fort Fort Nahargarth Any amin'ny havoana Aravalli izy io ary izy ireo no mpiorina tsara indrindra ho an'i Jaipur. Niorina tamin'ny 1734 ary nivelatra tamin'ny 1868, ary niasa ho toy ny sakana tsy mampino amin'ny fahavalo. Tao anatiny nisy fihemorana fahavaratra mpanjaka, lapa misy efitrano ho an'ny roa ambin'ny folo vady sy mpanjaka. Ny rehetra mifandray amin'ny lalantsara amin'ny rindrina.
Ny tranobe manankery iray hafa dia ny Fort Jaigarh, sahabo ho 15 kilometatra miala ny tanàna, amin'ny havoana feno vato sy karankaina. Efa antitra izy ity ary manana tafondro tranainy izy izay lohasaha lehibe indrindra eto an-tany. Toerana iray atolotra anao koa dia ny Tempolin'i Birla, miorina eo am-pototry Moti Dungari, amin'ny lampihazo avo, marbra fotsy daholo. Izy io dia natsangan'ny fianakavian'i Birlas, mpandraharaha mpanankarena be, tamin'ny 1988, ary natokana ho an'i Vishnu sy ny mpiara-miasa aminy, Lakshmi.
Mbola misy tempoly roa mpizahatany: ny Tempolin'i Govind Devji ary ny Tempolin'i Moti Doongri Ganesh. Fa mazava ho azy, tsy izy ireo ihany, misy ihany koa ny Tempolin'i Digamber Jain Mandir, 14 kilometatra miala, any Sanganer. Etsy ankilany, tonga ireo mpivahiny Galtaji, foibe fivahinianana masina ao an-tanàna, miampita ny Temple of the Monkey, miaraka amin'ireo biby malalaka ireo. Mahafinaritra ilay tranonkala, eo amin'ny havoana maitso.
El Lapan'ny farihy na Jal Mahal Harena ao Jaipur izy io, trano vatosokay miloko, eo amin'ny farihy manga, mifanohitra amin'ny fomba tsara indrindra. Mitsinkafona toy ny sambo eo afovoan'ny Farihin'i Man Sagar izy io ary tsy azo idirana fa mendri-piderana avy any ivelany. ny Lapan'i Sisodia Rani ary ny zaridainany dia valo kilaometatra monja miala an'i Jaipur amin'ny làlambe Agra. Io no fomba Mughal, nolokoina tamin'ny angano Radha sy Krishna. Ny zaridaina dia misy loharano maro, habakabaka ary paviliona maro loko.
El Zaridaina Vidyadhar akaiky izy io ary tsara tarehy be koa. Mitohy amin'ny lohahevitra maitso ny Central Park, faritra maitso lehibe eo afovoan-tanàna. Mahafinaritra ny mandalo, mijanona kely, maka sary. Io no valan-javaboary lehibe indrindra eto an-tanàna ary misy golf na golf aza. Ity koa ilay Sainam-pirenena, goavambe. Zaridaina iray atolotra anao koa ny Ram Nivas Garden, nanomboka tamin'ny 1868, ao afovoan-tanàna ary mampiantrano ny Tranombakok'i Albert Hall o Museo foibe, zoo, valan-javaboary, teatra ary galeria zavakanto.
Ity tranombakoka ity dia nentanim-panahy avy amin'ny Museum Victoria & Albert any Londres ary ao amin'ny efitranony dia ho hitanao ny asa-tanana misy fitaovana samihafa, lahatahiry, sary sokitra, fitaovam-piadiana, zavatra vita amin'ny ivoara ary fanangonana kely dia kely sy sarobidy avy amin'ireo sekoly kanto rehetra ao an-toerana.
Tranonkala hafa mitovy amin'izany ny sarivongana vita amin'ny marbra fotsy milay an'ny fiainana, mpanorina an'i Jaipur, Mpanjaka Sawai Jai Singh II. Sa ny Minar Ishwar, akaikin'ny vavahady Tripolia, natsangana tamin'ny 1749, avy eo an-tampony ianao dia afaka maka sary tsy hay hadinoina.
Ary tsy afaka manadino ny Fahatsiarovana an'i Queens, ny faritra fandevenana izay an'ny vehivavy ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka, eo amin'ny lalana mankany Fort Ambar. Izy io dia crematorium misy cenotaphs tsara tarehy maro, vita amin'ny marbra sy vato eo an-toerana. Toerana iray mahaliana hianarana momba ny tantaran'ny Indiana sy ny toerana misy anao dia ny Museum Museum Waxur, ao anatin'ny Fort Nahargarh, miaraka amina sary vongana 30, anisan'izany i Gandhi, Bhagat Singh na Michael Jackson.
Toerana iray malaza any Jaipur koa ny Sarimihetsika Raj Mandir, sinema mihaja izay mety indrindra hankafizanao sarimihetsika sinema indianina tsara. Nanomboka tamin'ny 1976 izy io ary mihoa-pefy, miaraka amin'ny tohatra sy ny chandelier na aiza na aiza. Misy koa ny Lapan'i Madhvendra ilay Mpanjaka Sawai Ram Singh dia nanangana an'ireo mpanjakavavy sivy, tokony ho 15 kilometatra raha te-hifindra ianao, na ilay Tempolin'i Akshardham, iray amin'ireo be mpitsidika indrindra noho ny famirapiratany maritrano.
Ny valan-javaboary, tempoly, trano mimanda no resahina ... saingy mila miresaka tranombakoka bebe kokoa isika: misy ny Museum of Gems ary firavaka, akaikin'ny vavahady Vaovao, ny Tranombakoka Amrapali, natokana ho an'ny firavaka indianina ihany koa, ny Museum of the Legacies, natokana ho an'ny kolotsaina Rajasthan sy ny Tranombakoka Anokhi ny sora-tanana, izay miasa amin'ny trano mahafinaritra sy ny Jantar Mantar, tranokala iray manerantany Io no lehibe indrindra amin'ireo trano fandinihana dimy namboarin'ny Mpanjaka Maharaja Sawai Jai Singh II, mpanjaka mpanorina ny tanàna. Mahavariana izany.
Fampahalalana azo antoka momba an'i Jaipur
Ahoana no ahatongavana any: manana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena i Jaipur, seranam-piaramanidina Sanganer. Misy sidina anatiny mankany India manontolo. Izy io koa dia azo aleha amin'ny alàlan'ny tanàna avy amin'ny fanjakana hafa ary amin'ny lamasinina avy any Agra, Delhi, Bombai, Calcutta, Udaipur, Bangalor, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Inona no ho hita any Jaipur
Tanàna mahafinaritra amin'ny Vondron'olona Valenciana